Aan Talaalno! Ka Ilaali Ilmahaaga Caafimaad iyo Ammaan sannadka 2021 - mareegaha blog -ka rasmiga ah ee CHPW Awoodda beesha Barta rasmiga ah ee CHPW
Aan Talaalno! Ilmahaaga ka dhig mid caafimaad qaba oo ammaan ah 2021
Talaalada | Ogosto 2, 2021
La dhejiyay Ogosto 2, 2021 - Waqtiga Akhriska: 2 Daqiiqad / s
Waxay ku dhowdahay in dib loogu laabto dugsiga! Ilmahaagu miyuu la socdaa tallaalada?
Tan iyo bilowgii masiibada COVID-19, boqolleyda carruurta yaryar ee la socda dhammaan tallaalada lagu taliyey waxay ku furantahay daaqad cusubwuxuu ka baxay ku dhawaad ​​2/3 ilaa kala bar.
Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato si ilmahaagu u ahaado mid caafimaad qaba oo ammaan ah intii suurtogal ah dayrta:
Tallaalka waa wax ka badan COVID-19 oo keliya. COVID-19 waa warka oo dhan, laakiin dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan dhowr tallaal oo carruurta ah markay koraan. Inaad ilmahaaga ku tallaasho waqtigiisa waxay kaa caawin doontaa inaad ka difaacdo cuduro badan oo halis ah, oo ay ku jiraan qaamo -qashiir iyo jadeeco.
Waa bilaash. Ma jirto wax kharash ah si aad u hesho tallaalada lagu taliyey.
Waa caadi in laga baqo. Carruurta da 'walba leh waxay ka baqaan cirbadaha. waxay ku furantahay daaqad cusubHalkan waxaa ku yaal xoogaa talooyin ah si aad ugu guuleysato jitters -ka.
Kooxdaada daryeelka caafimaadka ayaa halkan u joogta inay ku caawiyaan. La xiriir dhakhtarka ilmahaaga ama bixiyaha xanaanada caafimaadka si aad u weydiiso haddii ilmahaagu u baahan yahay tallaallo lagu taliyay. Colleen Haller, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Agaasimaha Tayada Washington (CHPW), ayaa leh, “Kiliinigyo badan ayaa jadwalka booqashada kalkaalisada u siin kara tallaalada kaligood ama ku siin kara farmashiyaha, taas oo ku xidhan tallaalka iyo da’da ilmaha.” Waxa kale oo aad jadwal u samayn kartaa ballan ilmo si fiican u dhasha.
Goorma ayaan ballansadaa ballanka tallaalka ilmahayga?
Noloshu way mashquulsan tahay, taasina waxay run u tahay bixiyaha caafimaadka deegaankaaga iyo sidoo kale adiga iyo qoyskaaga. Haddaba goorma ayay tahay inaad ballansato booqashooyinka dhakhtarka ee muhiimka ah, sida baaritaannada carruurta iyo tallaallada?
LuAnn Chen, oo ah Agaasimaha Caafimaadka Sare ee CHPW, wuxuu ku taliyaa in kiliinig kasta uu ka duwan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay, “Daryeelka ka -hortagga joogtada ah waa in la jadwaleeyaa ilaa bil ka hor ee kiliinigyo badan. ”
Ma ogtahay inaad abaalmarin heli karto marka ilmahaagu qaato tallaalada lagu taliyey?
Xubnaha CHPW Apple Health waxay helaan kaar hadiyad ah $ 20 booqasho kasta oo ilmo fiican leh. Baro sida Barnaamijka Cunugga Wanaagsan u shaqeeyo. Markaa ammaan noqo, caqli yeelo, oo hubso in ilmahaagu qaato tallaalada!
« Ka caawinta ururada inay xiraan farqiga sinnaanta caafimaadka ee bulshooyinka midabka leh
Qoraalka CHPW ee Dhacdooyinka Afgaanistaan »